Graphic Dhizaini Inobudirira
Graphic Dhizaini Inobudirira Iri bhuku riri pamusoro pegrafiki dhizaini; inopa kujekesa, kutarisa kwakadzama kwemaitiro ekugadzira sechigadziro chinoshandiswa kutaura nevateereri vane tsika dzakasiyana kuburikidza nenzira dzekugadzira zvinosanganisira zvinorehwa nekuumbwa kwemifananidzo sechigamba, Kugadzira nzira senzira, Kugadzira dhizaini senge mamiriro emusika, Kugadziridza dhizaini yakagadzirirwa matemplate uye ine mabasa kubva kune anonyanya kufungidzira ekugadzira e, ayo anoshandiswa kuratidza nheyo dzekugadzira.
Mifananidzo Yeimba Yezororo
Mifananidzo Yeimba Yezororo PRIM PRIM studio yakagadzira inozivikanwa yeiyo sevaenzi imba SAKÀ inosanganisira: zita uye logo dhizaini, mifananidzo yekamuri yega yega (chiratidzo dhizaini, Wallpaper mapepa, magadzirirwo emadziro emadziro, mutsago zvishandiso nezvimwewo), dhizaini webhusaiti, zvikwangwani, mabheji, mazita emakadhi uye kukoka. Kamuri yega yega mune yevaenzi imba SAKÀ inopa imwe ngano yakanangana neDruskininkai (guta rekutenderera muLithuania imba irimo) nenzvimbo dzakatenderedza. Kamuri yega yega ine chiratidzo chayo seshoko rinokosha kubva kuchiratidzo. Iyi mifananidzo inoonekwa mumukati yemifananidzo uye zvimwe zvinhu zvinogadzira chimiro chayo chekuona.
Premium Vodka Nezvishongo
Premium Vodka Nezvishongo Premium Vodka ine Swan yakavezwa sirivheri zvishongo zvakavezwa neSwarovski Crystals.
Hove Dzegungwa Dzerudzi
Hove Dzegungwa Dzerudzi Pfungwa yeiyi nyowani chigadzirwa ndeye "Huru kubva". Kuti titaure zviri nyore, isu takagadzira zvisingajairike dhizaini dhizaini. Kazhinji setinodya yegungwa yakasviba uye yakarongedzwa mapakeji, dhizaini yedu "Inosununguka kubva" chero ipi zvaro ballast. Kune rimwe divi, iro reji zvakare nderokuzvinyima uye vanhu vane hanya nechikafu. Saka zvinoita sekunge nemaune imwe mhando yekurapa. Kutengesa kwakatanga munaJanuary 2013 uye kwakanyanya kubudirira. Mhinduro yebhizimusi rekutengesa ndeiyi: Takamirira nguva yakareba kwazvo kune yakanaka-yakataridzika uye yakanyatsofungwa pfungwa. Mutengi anozvida.
Stationery "Commod" inoshongedzwa basa remukati. Sezvinongoitika kune mota inoti "zvakanaka zvematanda zvigadzirwa" kambani inoona zvakanyanya akasarudzika mabasa ekugara. Stationery yaive yekusangana nechikumbiro ichi. Chimiro chakaderedzwa asi chiri kutamba chakawanikwa uchishandisa kunyanya ruvara wakasanganiswa. Iyo stationery inoratidza chimiro cheiyo firm pamwe neyakafunga yavo yekushandisa iyo chete yakakosha midziyo: Pepa racho rakagadzirwa ne zana muzana yekotoni, envelopu dzemapuranga chaiwo veneer. Makadhi ebhizinesi "akasanganisa" chirevo chemakambani nekugadzira kamuri-matatu-kamuri ine yakajairika zvigadzirwa zvematanda.
Alignment to Air 3D Animation Chitatu 19 Ndira
Marais Chipo Kurongedza Makeke Chipiri 18 Ndira
Cliff House Kupera Kwevhiki Muvhuro 17 Ndira
Kuisirwa Optic Graphic Dhizaini Inobudirira Mifananidzo Yeimba Yezororo Premium Vodka Nezvishongo Hove Dzegungwa Dzerudzi Stationery